Cali Guudlaawe oo faray Saraakiisha Amniga inay ku baxaan deegaankii dadka lagu laayay | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Cali Guudlaawe oo faray Saraakiisha Amniga inay ku baxaan deegaankii dadka lagu...
Madaxweyne kuxigeenka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa faray Guddoomiyaha Gobolka Sh/Dhexe iyo Taliyeyaasha Ciidanka sida qeybta 27aad Taliyaha Guutada ee Milateriga iyo Taliyaha qeybta Booliska inay si degdeg ah ugu baxaan deegaankii saaka ay ka dhacday falkii arxan-darada ahaa ee lagu dilay dad culimo ahaa.
Madaxweyne kuxigeenka oo kulan la qaatay Guddoomiyaha Gobolka iyo Saraakiisha Ciidanka ayaa ku amray in dadkii ka dambeeyay falkaas waxashnimada ah in gacanta lagu soo dhigo, si cadaaladda loo horkeeno, waxaana Madaxweyne kuxigeenka uu tacsi u diray eheladii iyo qoyskii ay ka geeriyoodeen dadkii saaka lagu dilay deegaan ka tirsan degmada Raage Ceelle
Wafdi uu hoggaaminayo Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan, Taliyaha qeybta 27aad ee Ciidanka Xoogga dalka Jen. Tareedishe iyo Taliyaha Qeybta Booliska Col. Xasan Dhicisow iyo Saraakiil kale ayaa ku baxay deegaankii dadka lagu dilay oo u dhaxeysa Raage Ceelle iyo Cadale.
Waxaa uu ku amray Guddoomiyaha Gobolka iyo Saraakiisha Ciidanka in dhacdadaas si degdeg ah u farageliyaan deegaankaas, si dhibaato hor leh looga hortago.
Dhacdadii saaka ka dhacdya deegaankaas ayaa la sheegayaa inay salka ku heyso aano qabiil oo ahaa beelo in muddo ah deegaankaas ku dagaalamayay, isla markaana dhowr jeer oo hore heshiis la dhex dhigay.
Maleeshiyo hubeysan ayaa saaka illaa shan ruux oo culimo iyo macalimiin ahaa ku dilay deegaan ka tirsan degmada Raagge Ceelle, waxaana shanta ruux ee la dilay ku jireen subac.
Next articleIn ka badan 200 oo Maxbuus oo ka baxsatay xabsi ku yaalla dalka Uganda